MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): ရိုးရှင်းသွက်လက် မြန်မာ SMS
ရိုးရှင်းသွက်လက် မြန်မာ SMS
Posted by MgHla at 1:00 pm
GSM ဖုန်းတွေမှာ SMS ကိုမြန်မာဘာသာ အသုံးချပြီး ပို့နိုင်တဲ့ Software နောက်တစ်ခုပါ..။ MySm ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပေါ်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..။ Software နာမည် sm3 ဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကောက်က Simple Myanmar Message ပါ..။
ပို့လာမယ့် Message ကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့အတွက် Software ကို အင်တာနက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်ရာ ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ရယူနိုင်တာကို သိရပါတယ်..။ ကုန်ကျစရိတ် မရှိဘဲ လက်ခံ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက် ဒီလိုဖြန့်ချီရခြင်းပါလို့ sm3 အဖွဲ့ဝင် သူငယ်ချင်း လုပ်သူက ပြောပါတယ်..။ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ Message ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Code Activate ကို ၅၅၀၀ကျပ်သာ ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..။
Download sm3 Here
more info: http://bagannat.blogspot.com/
My Label:Myanmar News, GSM, SMS, Myanmar SMS
Can we use that software in oversea?
Could you provide more detail how we install in our phone?
i like white template style.
it's better when i read your blog foralong time.
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... အသုံးပြုတဲ့ handset ပေါ်မူတည်ပြီး software ထည့်လို့ ရမရတော့ ရှိတယ်... sm3 သုံးတဲ့ ဖုန်းတွေကနေ ပို့တဲ့ sms ကို လက်ခံရုံအတွက်ပဲ သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ ပေးထားတဲ့ download link ကနေ download လုပ်ပြီး ဖုန်းထဲကို ထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်... အထွက်ပို့ချင်တဲ့ အခါမှသာ handset တစ်ခုအတွက် 5500-ကျပ်ပေးပြီး ဝယ်သုံးရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်...
ဘယ်မှာ ဝယ်ရမှာလဲ.. 5500 ကိုဘယ်မှာ သွင်းရမှာလဲ.. ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပါအုံး.. ဘယ်အဖွဲ့ကလုပ်ထားတာလဲ... လေးစားတယ်.. တော်လည်း တော်ကြတယ်.. ဂုဏ်ယူပါတယ်..
sm3 ကို ရန်ကုန် ဘုန်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ G-Shop မှာ Code Activate လုပ်လို့ရပါတယ်။ ၅၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
Dear Ko Maung Hlan,
Thank you so very much for sharing us your knowledge and skill free. I amabeginner of Burmese language. Your blog is one of the most important resources for me to learn about Zawgyi font and its system.
Dr. Salai Ngun
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမောင်လှ.. ကျွန်တော်က အခုမှ blog စရေးတာပါ.. ကိုမောင်လှ blog တကယ်အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်..
crack version လေး မရှိဘူးလား.. :P
oversea မှာ သုးချင်ပါတယ်။ စာပို.ချင်တာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ရန်ကုန်ကို ဟန်းဆက်လှမ်းပို.ပေး၊ activate လုပ်ပြီး ပြန်ပို.ခိုင်းရမှာလား။ အလွယ်ဆုံးနည်းလေး သိချင်ပါတယ်
blogspot.com ကို ban ပြီ...
Google talk (Gtalk) Avatar #2
Google talk (Gtalk) Avatar
Dynamic Report in Microsoft Access
ကိုယ့် Blog မှာ နောက်ဆုံး ရေးထားတဲ့ Comment များကိ...
ဒီနေ့ ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ
Blog Day 2007 @ Mandalay